Kedu ihe mkparịta ụka na-agba agba bọl?
Olee Mkpa Ọ Dị? Ihe mkparịta ụka ọ dị na ịhọrọ otu bọl?
"Mkpakọ" bụ okwu a na-etinye na bọọlụ bọọlụ ma na-ezo aka na ọnụọgụ ahụ na-adaba na mmetụta. Ma ọ bụ, ịkọwa ya n'ụzọ doro anya, mkparịta ụka bụ otu njirimara nke bọl golf a dị nro ma ọ bụ guzosie ike bụ:
Egwuregwu gọọmenti dị mkpụmkpụ ga-adabawanye na mmetụta (ọ ga-enwe mmetụta dị nro);
a ga-eme ka mgbidi dị elu na-eme ka ọ ghara ịdị irè (ọ ga-adịwanye njọ).
A na-anwale bọọlụ golf maka mkpakọ na usoro mgbakọ na mwepụ na-etinye aka na ịmepụta uru bara uru.
(A na - akpọkarị uru a "mpịakọta mkpakọ.") Mkpakọ nwere ike ịdị site na 0 ruo 200, ma ọtụtụ bọl bọọlụ na-ebugo site na 60 ruo 100.
A na-ewere mkparị nke 90 na elu dị ka nnukwu mkparịta ụka; a na-ewere mkpakọ na 70s ma ọ bụ ala dị ka obere-mkpakọ.
Otú ọ dị, ihe na-eme na ụlọ ọrụ bọl na-acha bọlbụ na-enwe mmetụta dị ala (mmetụta dị nro), bọọlụ, na "ọkpụkpụ-obere mkparịta ụka" blọọgụ n'ime afọ 40 na ọbụna 30s nọ gburugburu ugbu a kwa.
Nkọwa mkpakọ na-agwa gị ihe ọ bụla Banyere arụ ọrụ arụ?
Ee, mana ma eleghị anya ọ bụghị n'ụzọ ọtụtụ ndị gọọmenti kweere.
Kedu ihe mkparịta ụka na-agwa gị banyere bọl golf : Olee otú nro ma ọ bụ guzosie ike ọ ga-enwe mmetụta. N'ịkụda mkparịta ụka ahụ, ọ ga-adị nro; nke dị elu karịa mkparịta ụka ahụ, ọ ga-adị ya mma. Ọdịiche a na-eche na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị gọọmenti nwere ike ịhụ. Ị nwere ike ịmasị ka obi dị jụụ ma ọ bụ dịkwuo njọ karị, ma ọ bụrụ na ị maara njirimara mkpado nke bọọlụ ị na-achọ ịzụ, ị nwere ike ịhọrọ ọ ga-amasị gị.
Kedu mkparịta ụka na-agwaghị gị gbasara bọl golf : Ego ole ka bọl ga-agbanye ma ọ bụ ókè ọ ga-aga, na otu "ezigbo" bọlbụ nyere maka ọsọ ọsọ gị.
N'ikpeazụ, mkpakọ nwere ike inwe mmetụta dị anya na ntụgharị, mana n'ikpeazụ àgwà ndị a na-ekpebi site na njirimara niile nke bọl golf, ọ bụghị naanị otu ihe mkparịta ụka.
Mmetụta nrụpụta mmetụta ọ bụla nwere mmetụta dị nro na anya, na-emetụta mkparịta ụka mkparịta ụka ọ bụla ọzọ, bụ obere ego ma bụrụ ihe ndị ọzọ kpatara.
Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, mkpakọ nke onwe ya n'onwe ya abụghị ihe na-egosi nhụ anya dịgasị anya ma ọ bụ nyochaa bọl golf a ga-enwe.
Na ndụmọdụ ya na-atụle bọmbụ gọlfụ, Titleist na-ekwu nke a: "Mkpakọ okwu bụ naanị ule nke ịdị nro dị nro nke bọl golf, otu golfer nke nwere 'mmetụta' maka bọl softer nwere ike ịhọrọ bọmbụ mkpirisi."
Ozokwa, na megidere nkwenkwe a kwenyere na ụwa na golf, ọ dịghị njikọ dị n'etiti ọsọ ọsọ nke golfer na ọtụtụ mkparị ọ "chọrọ." Ọzọkwa, ọ bụrụ na mkparịta ụka na-echebara echiche n'ịhọrọ bọl golf, ọ bụ ihe na- eche .
Na ndụmọdụ ya na pros na golf na ihe nkwụsị, Titleist na-akọwa ya n'ụzọ doro anya:
"Enweghị uru bara uru ọ bụla metụtara ịhọrọ bọl na mkpakọ kpọmkwem iji tụnyere ọsọ ọsọ gị."
Ya mere, olee ihe dị ala na nchịkọta golf?
Nke bụ nke a bụ: Mkparịta ụka bụ ngosipụta nke obi ụtọ gọọmenti golf ma ọ bụ nkwụsi ike, na, ya mere, njedebe mkparịta ụka nke bọl nwere ike inye gị ihe na-egosi ma ọ ga-adị gị mma.
Onye na-agbachitere onye na-agbachitere bụ Onye Mbụ nke Nchebe
Iwu Iwu Ogwuregwu Olympic
Esi agba egwu Red, White na Blue Golf
The Whiff: Otu n'ime nchịkọta kacha mma nke Golf
Ihe Nassau Golf Wager na otu esi aga ya
Otu esi gbanye Skis
Ebere Edere Epeego 18-Hole E Dere
Egwuregwu Tenis Ntọala Strokes - The Foreground Topspin Serve
Kedu ihe bụ 'Ịkụcha' nke nkedo na-agagharị na Ị Dị Nlekọta?
Ejiri ihe dị iche iche na ọrụ ha na-eme n 'esemokwu
Ọnọdụ Cheerleading kachasị elu: Egwu, Ntọala, na Spotting
Otu esi esi gbapu mmiri - Ntuziaka na-eme mkpesa site na nchịkọta kacha elu
Marie Curie na foto
Nkọwa na ihe atụ nke okwu arụ ọrụ n'asụsụ Bekee
Ihe Nlereanya Na-adịghị Mkpa Maka Ọkachamara Duke
Okwu Grik nke Ịtali: Nye
Agha Chineke nke Ụwa Oge Ochie
PADILLA - Aha aha na mmalite
Ndụ na Amish Amish
Aha aha ndị China maka Ụmụ agbọghọ
Kedu ihe bụ Balkanization?
Iji 'A' pụtara 'na Style nke'
Esi agbago okpu igwe na mmiri ozuzo, Icy, na Wet Weather Conditions
Ndi American Native Celebrate Thanksgiving and Should You?
'Na-achọsi ike na ihe ọ bụla' Characters
Ụgbọala ndị ochie 1880 Site n'afọ 1916
Okpukpo Grik nke Ozo: Gini Ka O Putara?
Kedu ka arụmụka NHL Shootout si arụ ọrụ
Na-ekwu okwu banyere Ịkụziri Ụmụaka, ma ọ bụ Okwu Nlekọta
Ndị 10 Amụma nke Latin America na History
Business Majors: Ụlọ ahịa
Mary Wollstonecraft: A Ndụ
Gini ka ndi Quran na ekwu maka ime ihe ike ndi otu?
Nkọwa nke Verbing na asụsụ
Ihe ndekọ nke Edward Durell Stone